Thursday May 21, 2020 - 15:29:15 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wararka ka imaanaya dalka Koonfurta Suudaan ayaa sheegaya in dagaallo dad badan ku hoobteen ay ka qarxeen gudaha wadankaasi.
Wakiilka Q.Midoobay ee dalka South Suudaan ayaa xaqiijiyay in dagaallo ka dhacay gobolka Jonglei ay ku dhinteen dad ka badan kun ruux, dagaalka ayaa dhaxmaray laba maleeshiyo beeleed.
Dagaalka ayaa sababay in lagubo tuulooyin iyo deegaanno ay deganaayeen dad rayid ah, mas'uuliyiin ayaa sheegay in ciidamo ka socday Q.Midoobay ay isku dayeen joojinta colaaddan balse maleeshiyaadku ay diideen in ay dirirta joojiyaan.
Wararka ayaa intaas ku daraya in rag hubaysan oo katirsan qabiilka Moorli ay weerareen lix tuulo oo katirsan gobolka Jonglei waxayna maalin qura dileen kun ruux halka ay dhaawaceen sedax boqol oo kale.
Saraakiil ku sugan magaalada jubba ayaa saadaalinaya in dhimashadu ay gaari karto 1500 oo ruux sababa laxiriira Meydadka oo wali daadsan tuulooyinka fog fog iyo baadiyaha gobolk Jonglei ee Koonfurta Suudaan.
Xafiiska UN-ka ee Koofurta Suudaan ayaa ku eedeeyay axzaabta siyaasadda in ay ku guul darraysteen soo dhisidda maamullo ay iska wada arkayaan qabaa'illada Koonfurta taas oo keentay in dagaallada ahliga ay sii xoogeystaan.